မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများမှို | injection မှိုဝန်ဆောင်မှု - CBPMM
မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများတန်ဆာထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု. မော်တော်ယာဉ်များ၏ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ပါဝငျသညျ။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်မော်တော်ယာဉ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ပန်းတစ်သိသာသောအဘို့ကိုထုတ်လုပ်အသုံးပြုသည်။
အဆိုပါဆေးထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. ထုတ်လုပ်အသုံးပြုသည် 90% ကားများအတွက်မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ။ ပလတ်စတစ်သူတို့ပေါ့ပါးဖြစ်သကဲ့သို့, မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လွန်းသည်အလွန်အကြမ်းခံဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါမော်တော်ကားများ၏အစိတ်အပိုင်းများအများစုနည်းပညာကို အသုံးပြု. အလွန်လျင်မြန်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးထုတ်လုပ်မှုအမြောက်အများ၌ပြစ်မှားမိသည်ကိုကတည်းကကုန်ကျစရိတ်အလွန်နည်းသည်။
အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလွန်ဆေးထိုးတန်ဆာကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်ကနေအကျိုးသိရသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးတိကျစွာ-based နေသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်မှီခိုရသောစက်မှုလုပ်ငန်း, တသမတ်တည်းနှင့်သုံးစွဲဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံသည်။
အဆိုပါကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မော်တော်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်နေသော nil တိကျအမှားအယွင်းများမှမှုမရှိခြင်းကိုရှိပါတယ်။ ဆေးထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်အဆိုပါအစိတ်အပိုင်းများအလွန်အားကောင်းတဲ့နှင့်များမှာ အကြမ်းခံ မော်တော်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်မဖြစ်မနေဖြစ်၏။
ဆေးထိုးတန်ဆာနည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်တကွ, မော်တော်ကားဟာသူတို့ရဲ့တိုးပွားစေရာပေါ့ပါးဖြစ်လာကြပါပြီ လောင်စာထိရောက်မှု လည်းများထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူဘေးကင်း အရည်အသွေးမြင့် နှင့် အကြမ်းခံ အစိတ်အပိုင်းများကို။
မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများမှိုများအတွက်ပလတ်စတစ် Injection ကိုမှိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များ
အဆိုပါပလပ်စတစ်ဆေးထိုးမှိုဖြစ်စဉ်ကိုတာရှည်ခံခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းများကုန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်နည်းပညာကို အသုံးပြု. အတော်ကြာအားသာချက်များရှိပါသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအဓိကအားသာချက်အချို့မှာနေသောခေါင်းစဉ်:
ကိုပုံသွင်းအဆိုပါမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဦးအလွန်ဖြစ်ပါတယ် အကျိုးရှိစွာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို။ မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများအမြောက်အမြားဤလုပ်ငန်းစဉ်ကထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ထုတ်ကုန်မြင့်မားတိကျစွာ-based, တူညီများနှင့်တသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါထုတ်ကုန်နောက်ထပ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ထိရောက်မှုမှဖြည့်စွက်ထားတဲ့အလွန်လျော့နည်းအချိန်အတွက်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ injection တန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်အားနီးပါးနှင့်အတူမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ် သုညအမှား နှုန်းထားများ။
The automotive industry requires parts and components of အရည်အသွေးမြင့် to be used for ensuring safety, and hence the injection molding process is the ideal for the industry.
ဆေးထိုးတန်ဆာနည်းပညာကို အသုံးပြု. မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းသည်အလွန်ဖြစ်ပါတယ် ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော။ အဓိကကုန်ကျစရိတ်ထုတ်ကုန်များ၏ဒီဇိုင်းများနှင့်မှိုအတွက်ရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ထုတ်ကုန်သိသိသာသာထုတ်လုပ်မှု၏အလုံးစုံကုန်ကျစရိတ်ချတတ်၏ထားတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာဒါမှမဟုတ်ပင် millions- အတွက် bulk- ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ဆေးထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်အားကုန်ကြမ်းအဖြစ်တစ်ဦးထက်ပိုပလပ်စတစ် resins သုံးပြီး၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
Filler ကိုလည်းထုတ်လုပ်ထုတ်ကုန်များ၏အစွမ်းသတ္တိ, မာကျောမှုတိုးမြှင့်ဖို့ပလပ်စတစ် resins မှဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။
ကိုပုံသွင်းအဆိုပါမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများကိုမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောဖြစ်လာသည်။ မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများတစ်ဦးကကြီးမားတဲ့အများစုထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုမော်တော်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောနေသော high-quality နဲ့တိကျ-based ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကုန်ထုတ်လုပ်မှုအမြောက်အများပမာဏပြုခြင်းနှင့်ဤအရပ်အလွန်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးထိုးတန်ဆာကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်သည့်မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများအလွန်ပေါ့ပါးနေကြသည်အဖြစ်ကမော်တော်ယာဉ်၏လောင်စာထိရောက်မှုတိုးတက်စေရန်ကူညီပေးသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဆေးထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသုံးပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အသုံးအများဆုံးမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများတချို့ကနေသောခေါင်းစဉ်:
ထိုအမြန်နှုန်းပြကိရိယာကဲ့သို့တူရိယာပြားရတာဟာထားတဲ့ကားတစ်စီး dashboards, လောင်စာဆီ gauge, စတီရီယိုစနစ်များ, etc ထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်အားကထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
မော်တော်ယာဉ်အတွက်အဆိုပါရှေ့မီးအဘို့အထည်, taillight, ဘေးထွက်အမှတ်အသားများစသည်တို့ကိုထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ထုတ်လုပ်ကြသည်။
ဤရွေ့ကားအလင်းအမှုပေါင်းပိုကောင်းအရည်အသွေးနှင့်ကြာရှည်ခံမှုထောက်ပံ့ထားတဲ့ပလတ်စတစ်ပေါင်းစပ် အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အလင်းသည်အမှုများသည်၎င်း၏အသက်ရှည်သေချာသည့် impact မှပေါ့ပါးခြင်းနှင့်တာရှည်ခံခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါကားကိုဘန်ပါအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအများကြီးပြောင်းလဲပါပြီ။ အစပိုင်းမှာသူတို့ electroplated သံမဏိထံမှပြီးတော့လူမီနီယံထဲကနေကြ၏။ နောက်ပိုင်းတွင် 1980 ကနေ, သူတို့ကပလတ်စတစ်ကနေဖန်ဆင်းတော်ခဲ့ကြသည်။
ဖန်အားဖြည့် polyester, polyurethane, ပြုပြင်ထားသော polypropylene, polycarbonates စသည်တို့ကိုတူသောပလတ်စတစ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားကုန်ထုတ်လုပ်မှုဘန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ထုတ်လုပ်အဆိုပါထိုင်ခုံက high-quality နဲ့ခြစ်-ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအခြားအကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနည်းစနစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လည်းအလွန်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
တံခါးကို Panel များ
မော်တော်ကားများတွင်တံခါးကိုပြားထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ တံခါးကိုပြားအတွင်းပိုင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်မပေးသာ, ဒါပေမယ့်ကားမောင်းနေစဉ်ကိုလည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည်။
တံခါးကိုပြားသိုလှောင်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဒေသများနှင့်အတူပလတ်စတစ်ပုံသွင်းအစိတ်အပိုင်းများထားရှိရေး။ ဆေးထိုးတန်ဆာသုံးပြီးလုပ်တံခါးကိုပြားသက်ရောက်မှု-ခံနိုင်ရည်ပေါ့ပါးခြင်းနှင့်တာရှည်ခံဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါပေါ့ပါး feature ကိုအသုံးပြုမှုလွယ်ကူအတွက်ကူညီပေးသည်ကိုလည်းလောင်စာထိရောက်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
မော်တော်ကားအတွက်စတီယာရင်ဘီးကိုအရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့်ဆေးထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်အားကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပုံမှန်စတီယာရင်ဘီးသတ္တု core ကိုကျော် polyurethane တူသောသင့်လျော်သောပလတ်စတစ်ကိုပုံသွင်းခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်။
ဒီနည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်အဆိုပါစတီယာရင်ဘီးနှင့် ပတ်သက်. များမှာ 20% အဟောင်းစတီယာရင်ဘီးထက်ပိုမိုပေါ့ပါး။ ဒါကစတီယာရင်ဘီးရဲ့ကိုင်တွယ်နှင့်တိမ်းပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
အဆိုပါစတီယာရင်ဘီးလည်းပိုမိုတာရှည်ခံဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဆေးထိုးတန်ဆာနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်သည့်အခါခံနိုင်ရည် impact ။